Nzira Dzakaratidzirwa Nzira Dzako Diki Bhizinesi Kubatsirwa kubva kuSocial Media Kushambadzira | Martech Zone
Nzira Dzakaratidzirwa Nzira Dzako Diki Bhizinesi Kubatsirwa kubva kuSocial Media Kushambadzira
China, June 11, 2015 China, June 11, 2015 Douglas Karr
Iwe unogona kushamisika kuti, mushure mezvose zvidzidzo zvezviitiko uye humbowo, kuchine vanyengeri kunze uko mubhizinesi renyika diki vanotenda vezvenhau kungoparadza nguva. Usandibata zvisirizvo… zvinogona kunge zviri kutambisa nguva. Kana iwe uri kushandisa yako nguva kutarisa uye kutumira mameseji ekati, pamwe hausi kuzowana rakanyanya bhizinesi.
Ndine chokwadi chekuti mabhizimusi ekutanga paakawana nhare, vatungamiriri vacho vaishushikana kuti vashandi vanenge vachingotaura neshamwari dzavo zuva rese, futi. Asi ikozvino hapana anobvunza kukosha kwekugona kubatanidza kune bhizinesi parunhare - zvese zviri kubuda kana zvinopinda. Zvemagariro midhiya hazvina kusiyana… inzira yekutaurirana uye inoenderana nezano riri kushandiswa nekambani yako kurishandisa.
Kana iwe ukajoinha mapoka, ugovana misoro yekukosha, batanidza uye uteedzere vanokurudzira, batsira vanhu vane matambudziko, kusimudzira zvirimo zvako, curate uye kugovana zvirimo kubva kune vamwe, iwe unogona kukura yakanakisa network iyo inogona kupa makore emari.
Dambudziko zvakadaro harirarame mukuva nevezvenhau kuvapo asi nezvekuti mabhizinesi aya anoisa sei pasocial media zvakanaka. Kubva pane diki bhizinesi maonero, zvemagariro enhau kushambadzira zvinopfuura kungo wana zvekuda, mafeni, repins uye retweets, asi pane kuwana zvinotevera zvinotevera mabhenefiti, uye nezvimwe, izvo zvinoita shanduko huru kubhizinesi. Jomer Gregorio, CJG Kushambadzira Dhijitari.
8 Nzira dzeSocial Media Kushambadzira kuri Kubatsira Bhizinesi Diki
Yakawedzera webhusaiti traffic.
Inogadzira inotungamira pamitengo shoma.
Inowedzera kushambadzira zvemukati.
Inowedzera ruzivo rwechiratidzo.
Inotamisa chiratidzo chako.
Inokupa iwe hukuru vateereri nzwisiso.
Inovandudza brand kuvimbika.
Zvinonakidza kuti CJG yakashandisa izwi muchiso mukati meiyo infographic. Nepo paine yakawanda data yekutsigira iyo yakazara mabhenefiti enhau enhau pane brand, ini ndaizopokana kuti kukanganisa kune kwako vanhu yakakura zvikuru. Zvemagariro midhiya hachisi chigadzirwa kana sevhisi kutaura kwauri kubva kune bhizinesi diki, ndivo vanhu vebhizimusi diki!
Vanhu vanopa mukana wekutenda uye kubatirira izvo izvo chako chiratidzo chisingadaro. Vanhu vanogona kusvika kukuziva iwe, kuvimba newe, kukubvunza mibvunzo, uye pakupedzisira kutenga kubva kwauri. Yako mhando inobatsira kubva kune zvese izvi, hongu… asi nekuda kwevanhu vako. Pakati payo, ndizvo mumagariro midhiya, kwete chete nzira-nzira svikiro.
Tags: CJG Dhijitari KushambadzirahubspotinfographicBhizinesi dukupasocial media mabhenefitipasocial media infographic
Flippies: Shanduko yeCentury-Old Technology
Kufanotaura: Bhizinesi Rako Richava Bhizinesi reE-commerce